Myitter - Page 102 of 289 - Media and Entertainment
December 20, 2019 Myitter 0
၂၀၂၀ခုနှစ် သောကြာသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း သောကြာသားသမီးများ သောကြာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝထားရှိသူ ဖြစ်ပါက ဘဝအတွက် အောင်မြင်ခြင်း ပန်းတိုင်က လက်ကမ်းကြိုးဆိုလျက် ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူဆိုလျှင် ရင်းနှီးမြှင်နှံမှု အစုစုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြု လုပ်နိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် (၁၅-၁-၂၀၂၀)မှ […]
လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာနှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ပုံပါတထောင်ကျပ်တန်ငွေစက္ကူများကို လာမည့်၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှစတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံဖြင့် ငွေစက္ကူအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဝေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ကို၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနဖြစ်သည့် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား MRTV က […]
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူများ စတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဟု တရားဝင်ကြော်ငြာပြီ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်ကိုယ်စားလှယ် ဦး‌အောင်ခင်ဝင်းမှ ဗိုလ်ချူပ်ပုံပါ ငွေစက်ကူများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲသင့်ကြောင်း အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ရာအများ၏ ထောက်ခံမှု ရရှိခဲ့ရာမှ ယခုလာမည့်ဇန်နဝါရီလ တစ်ရက်‌နေ့တွင် ဗိုလ်ချူပ်ပုံပါ‌ ငွေစက္ကူများ ကိုင်တွယ် သုံးစွဲကြရ‌တော့မှာမို့ ဦးအောင်ခင်ဝင်းအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိရပါကြောင်း၊ ခရက်ဒစ် […]
”သွားတိုက်ဆေးဘူး ညှစ်ပုံချင်းမတူလို့ သဘောထားကွဲလွဲရာမှ” ကွာရှင်းခဲ့တဲ့လင်မယား”…….
သွားတိုက်ဆေးဘူး ညှစ်ပုံချင်းမတူလို့ သဘောထားကွဲလွဲရာမှ ကွာရှင်းခဲ့တဲ့လင်မယား မလေးရှားနိုင်ငံက ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ခြားကိစ္စနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ခြင်း မပြုရသော်လည်း သွားတိုက်ဆေးဘူး ညှစ်တဲ့ပုံစံချင်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အခြေအတင် စကားများရာမှ လင်မယားကွာရှင်းပြတ်စဲသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို WorldOfBuzz က ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး၊ AlinnMyay က ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ […]
”နေ့စဉ်ဆွမ်းခံလိုက်တာ ”(၁၇)နှစ်”ရှိပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့ မနော” …….
တောအလှ တောသဘာဝတွေကို အနှစ်သာရအပြည့်အဝနဲ့ သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မနောကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ မနောဟာ နယ်ကြိုက်သီချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်အကြိုက်သီချင်းတွေကို သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိမှာ Shwe FM ရဲ့ (၁၀)နှစ်ပြည့် ဂီတဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ Winner ရရှိသူ(၇)ဦးထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Shwe FM ရဲ့ (၁၀)နှစ်ပြည့် […]
”ဘုရားရှိခိုး ကန်တော့ရခြင်းကြောင့် ”ရရှိသော အကျိုးများ” …….
ဘုရားရှိခိုးရသောအကျိုး ဘုရားရှိ်ခိုးတယ်ဆိုတာ …ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား(၄၀)အနက် ဗုဒ္ဓါနုဿ တိကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းခြင်းဖြစ်တယ်ကွယ့် ။ ဗုဒ္ဓါနုဿ တိကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာ … ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကို စိတ်ဖြင့် အဖန်တလဲလဲ ဆင်ခြင်ခြင်းကို ဆိုလိုတာပဲ၊၊ သို့သော်… ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဆိုတာ အလွန်နက်ရှိုင်းတယ်။ ဂုဏ်တော်ကို မကျက်မှတ် မရွတ်ဆိုဘဲ စိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ဖို့ မလွယ်ကူဘူး၊၊ ဒါကြောင့် […]
”သူများသားသမီးကို စည်းမစောင့်တော့ ငါကလည်း စည်းထားစရာ မလိုတော့ဘူး”……
ရှယ်ပေးထားတာလေး ပျောက်သွားလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ် နေပြည်တော် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူမိသားစုရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဇ ရှိရင်တော့ ရှယ်သွားပေါ့ သူများသားသမီးကို စည်းမစောင့်တော့ ငါကလည်း စည်းထားစရာ မလိုတော့ဘူး မင်းတို့ကမှသူများသားသမီးကို စည်းမစောင့်တော့ငါကလည်း စည်းထားစရာမလိုတော့ဘူး…. နှင်းနု ဆိုတာ… အမည် -ဒေါ်နှင်းနုလွင် (ခ) ဝါနု အဖအမည် -ဦးဝင်းမြင့် […]
”မန္တလေး အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီး(ခုတင်-၅၀၀)” ဆေးရုံအုပ်ကြီး နှင့် ဌာနခွဲစာရေးတို့ လာဘ်စားမှုဖြင့် အရေးယူခံရ”…..
အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီး(ခုတင်-၅၀၀)၊ မန္တလေးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကြည်လွင် နှင့် ဌာနခွဲစာရေး ဦးအောင်ကျော်ဦး(ယခု ဦးစီးအရာရှိ (အုပ်ချုပ်/စီမံ)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုသရေးဦးစီးဌာန) တို့အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ် အရေးယူလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ မန္တလေးမြို့ အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီး(ကုတင် ၅၀၀)မှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဦးကြည်လွင် နှင့်အဖွဲ့သည် ရာထူးတာဝန်များကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ဆေးရုံအတွင်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် […]
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စံနှုန်းတွေက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံချိန် အထွတ်အထိပ်ရောက်တာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ် အများကြီးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရတော့ အမျိုးသမီးတွေက လိင်ဆက်ဆံချိန် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန် ခံစားမှုအထွတ်အထိပ် ရောက်ကြလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပါဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ခံစားမှု အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းအတွက် မိမိကိုယ်ကိုအမြင်ရယ် အဖော်ဖြစ်သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံချိန် […]
ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီးအကြောင်း မသိလို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရှာကြည့်တော့ မနက်ဖြန် ကျောက်ဂူဆရာတော် မန္တလေးက သူငယ်ချင်းအိမ်ကြွမှာမို့လာဖူးဖို့ လှမ်းဖိတ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဆရာတော်အကြောင်း မသိလို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရှိထားသာ ကျောက်ဂူဆရာတော်ကြီး အကြောင်းများစွာထဲမှ ကုသိုလ်တိုးရန် အနည်းငယ် ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည် ဘုရား။ ကျွန်နော်နှင့် ဆရာတော်ကြီး ရင်းနှီကျွမ်းဝင်နေခဲ့သည်မှာ (၂၆) […]
« 1 … 101 102 103 … 289 »